Frank Lampard Oo Sharraxay Waxa Ay Manchester United Kaga
Tababaraha Chelsea ee Frank Lampard ayaa soo bandhigay hal arrin oo ay Manchester United kaga wanaagsan tahay kooxaha kale ee horyaalka Premier League, gaar ahaan Liverpool iyo Manchester City oo lagu tilmaamo kuwa ugu xooggan.
Manchester United iyo Chelsea ayaa caawa ku ballansan semi-finalka FA Cup oo ay ku wada ciyaari doonaan Wembley, waxaana midkooda soo badisaa ay finalka ku kulmi doonaan Arsenal oo kusoo durdurisay Man City.
Kooxda tababare Ole Gunnar Solskjaer ayaa qaab ciyaareed wanaagsan muujinaysay intii uu bilaabmay sannadka 2020, waxaanan 19 ciyaarood oo xidhiidh ah oo kasoo bilaabmay dhamaadka bishii January ay ka badbaadeen in wax guul-darro ah ay soo gaadho.
Bruno Fernandes oo qayb muhiim ah ka noqday dibu curashada Manchester United, ayaa dhowaan ay is heleen Paul Pogba oo siiyey xorriyad uu hore ugu dhaqaaqo, si uu u caawiyo Anthony Martial, Marcus Rashford iyo Mason Greenwood oo goolal badan dhalinaya.
Frank Lampard oo ka hadlayay kulanka caawa ay kooxdiisu kaga hor tegayso Manchester United, ayaa waxa uu farta ku fiiqay hal shay oo Red Devils ay kaga wanaagsan tahay kooxaha kale ee xoogga lagu tiriyo ee Man City iyo Liverpool.
Lampard waxa uu ku dooday in Manchester United ay tahay kooxda horyaalka Premier League haysata shaxda koowaad (lineup) ee ugu awoodda badan, isaga oo tusaale usoo qaatay afka hore ee weerarka ee Martial, Greenwood iyo Rashford oo isku-geyn dhaliyey 62 gool xili ciyaareedkan.
“Waxaynu ognahay in Manchester United ay si wanaagsan u ciyaarayso. Waxay haystaan saddex ciyaartoy oo afka hore ah oo aad u wanaagsa, laga yaabaa inay yihiin saddexda ugu fiican waddanka ee ugu cadcad marka la eego tirooyinka, waxaanay isbeddelka ugu weyn sameeyeen intii uu Fernandes yimid bishii January.” Ayuu yidhi Frank Lampard.
Lampard oo hadalkiisa sii wata waxa uu raaciyey: “Waad arkaysaa xoogganaanta ay kooxdooda ay u keeneen oo ay wehelinayso tayadooda shaqsiyeed, laakiin waanu ognahay. Waa inaanu isku kalsoonaando, la tacaallo khatartooda oo ay iyaguna sidoo kale annaga naga sii werweraan.”